Ọgwụgwụ nke World Vault dị na Svalbard | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ọgwụgwụ nke World Vault dị na Svalbard
Daniel Palomino | | Gburugburu, Noticias
A maara nke ọma dị ka Ọgwụgwụ nke World Vault na nke a na-akpọ Svalbard Global Seed Chamber zoro ezo banyere mita 120 miri, nke dị kpọmkwem n'otu ugwu dị na agwaetiti Norwegian nke Svalbard, na Arctic.
Ulo a nwere oghe ma kwadebe ya iguzogide ntiwapụ nuklia, mgbawa ugwu mgbawa, ala ọma jijiji na ọdachi ndị ọzọ, ma nke mmadụ ma nke mmadụ.
1 Kedu ihe kpatara eji ewu Vault a?
2 Ihe okike ya
4 Nke mbụ mmeghe
5 Nwere mmetụta uche
6 Ọgwụgwụ nke World Vault agaghịzi adị mma
7 A ikpeazụ echiche
Kedu ihe kpatara eji ewu Vault a?
Ọgwụgwụ nke World Vault E wuru ya iji chekwaa ihe atụ 860.000 nke ihe karịrị ụdị mkpụrụ 4.000 sitere na mba 231.
Na ebumnuche na otu ụbọchị enwere ike iji ha mee ihe na ọdachi ụwa.
Emeputara ya na 2.008 ma taa nkpuru nkpuru osisi a anatala ihe kariri 20.000 nke nkpuru ohuru site na obodo di iche iche n’uwa.
Onye ikpeazụ sonyere na nke a abanyela na nke a (dika obodo nke nyere nkpuru) bụ gọọmentị nke Japan, nke nyere ihe atụ nke ọka bali.
Onye sonyere n'ihi nchegbu maka nchekwa dị ogologo nke ihe ọkụkụ gị nke bilitere mgbe ala ọma jijiji na tsunami nke 2.011.
Ihe okike ya
Vault ma ọ bụ ụlọ, bụ ndị gọọmentị nke Norway kwụrụ ụgwọ ma kwado ya Global Crop Diversity Trust, nke bụ otu nke ọtụtụ mba na ụlọ ọrụ nzuzo na-esonye, ​​gụnyere Bill na Melinda Gates Foundation.
Ihe ezubere na nke a bụ na-eje ozi dị ka kọbọd na ọba dịịrị mmadụ niile ma ọ bụrụ na ọdachi ga-ebibi ebe a na-akọ nri ugbu a na mbara ala, ma ọ bụ mmadụ kpatara ya dị ka agha nuklia, ma ọ bụ ihe okike dịka ala ọma jijiji ma ọ bụ "onye na-ekpochapụ".
Ntinye ya, nke ọnụ ụzọ ya na ndị na-emegharị ihe gbachitere ya, kewara n'ime ụlọ nkwakọba ihe 3, ebe ha na-edobe mkpuru-osisi na mwepu 18 site na igbe aluminom.
Site na nke a, ha nwere ike ịkwado ọnọdụ nchekwa nke mkpụrụ niile maka ọtụtụ narị afọ, nke ga-adịgide na oyi ọ bụrụgodi nkwụsị nke ike.
Ọnụnọ nke ụlọ akụ mkpụrụ abụghị ihe ọhụrụ, n'ezie, mba niile n'ụwa nwere ụlọ akụ nke ha.
Ebe a na-echekwa mkpụrụ osisi na atụmanya na, n'ihi otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, ihe ọkụkụ ga-apụ n'anya ụfọdụ ebe ma gbanwere ya.
A mụrụ ha dị ka nke a Mpaghara mkpụrụ osisi mpaghara, otu ụzọ dị mkpa maka nchekwa nri.
N'ụzọ dị otú a, ha na-enye ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọrụ ugbo nọ n'ógbè ahụ ụdị osisi dị iche iche, yabụ, n'ihe banyere ọrịa ma ọ bụ nsogbu mpụga, ihe ọkụkụ dị na mpaghara anaghị efu.
Ebumnuche ọzọ bụ maka nchekwa nke mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Svalbard, bụ n'ezie etiti nke usoro akụ akụ ụwa zuru ụwa ọnụ, ezubere iji kpokọta ma chekwaa ọtụtụ narị puku ụdị dị iche iche, si otú a na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osisi niile ụmụ mmadụ kụrụ.
Dịka e kwuru n'elu, Ọgwụgwụ nke Vawa ma ọ bụ Chamberlọ Mkpụrụ Globalwa maka ihe a niile, ọ nwere nchịkọta kachasị ukwuu nke ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche n'ụwa.
Na-echekwa nde na nde mkpụrụ nke ụdị 860.000.
O doro anya na ọ bụ inye gị echiche, dị ka "ndabere" nke na-achọ ichebe ụmụ mmadụ site na agụụ nke nsogbu mgbanwe ihu igwe ma ọ bụ ọdachi ndị na-emere onwe ma ọ bụ nke mmadụ kpatara.
Nke mbụ mmeghe
Ee, mmeghe mbu ma ọ bụghị nke ikpeazụ.
Ọgwụgwụ nke Vawa Vault ma ọ bụ "Igbe Noa" nke mkpụrụ mbụ hụrụ ìhè Sun na 2015.
N'afọ ahụ, ụwa maara nke ahụ Ndị isi ụlọ akụ ICARDA na Aleppo (agha kwagara Beirut n'ihi agha ahụ) Achọrọ ka esi na Svalbard dọpụta ihe nlele 116.000.
Ọ dịghị mkpụrụ a ga-ewepụ ruo n'afọ ahụ. n'ihi agha obodo Syria, nke kpatara ọgba aghara dị otú ahụ nke na ndị "na-eche" Njedebe nke World Vault welitere mkpu.
Brian Lainoff, ọnụ na-ekwuchitere Crop Trust (otu n'ime ndị nlekọta mba ụwa)
"Enwere ike mepee uko ahụ ma ọ bụrụ na ọdachi dakwasị ya, dịka ide mmiri ma ọ bụ ọkọchị, nke nwere ike iyi ihe ọkụkụ egwu na ikpochapụ."
"Anyị amaghị na ihe ga - eme, n'oge ọbụla ha nwere ike ibuso ụlọọrụ agha." Lainoff kwuru banyere International Center for Agricultural Research na Arid Zones nke dị na Syria, otu n'ime ụlọ akụ ụwa 11 nke Crop Trust.
Ihe kpatara arịrịọ maka iwepụ mkpụrụ bụ na ha ga-eweghachite nchịkọta nke ọgbaghara mebiri (gbuo mmadụ 250.000 n'oge ahụ ma mee ka ihe karịrị nde 11 gbapụ n'ụlọ ha).
Ọgba aghara, dị ka n'oge ahụ na agha Siria, bụ kpọmkwem ụdị ihe ndị e mere usoro nchekwa a iji kwado.
Ikpuchido iche iche ihe dị iche iche dị n'ụwa bụ naanị ebumnuche nke Svalbard Seed Vault.
Nwere mmetụta uche
Agbanyeghị, ndị ọrụ Svalbard Responsible Crop Trust kwenyere na Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọ dị nwute na mbupute mbụ na Vault a bụ nzaghachi maka ọdachi mmadụ mere. kama ụfọdụ ụdị ọdachi ihu igwe na-eme.
N'ụzọ dị mma, ICARDA ga-eweghachi ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche ọ chebere, nke nwere ike bụrụ nke dị oke mkpa na-enyere ụwa aka ịlanarị ihu igwe na-agbanwe nke na-etinye ọnọdụ nke gburugburu ebe obibi n'ihe ize ndụ.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ na ọ dị nwute, ọ dị mwute na ICARDA enweghị ike ịnọgide na-arụ ọrụ ya na Aleppo (obodo kachasị na Syria na otu n'ime obodo ndị kacha ochie bi na ụwa) n'ihi na agha ahụ bibiri ya.
N'ịnọgide na-enwe akụkọ ihe mere eme nke ọrụ ugbo, akụ ndị a na-echekwa ihe kachasị baa uru nke mere ka anyị nwee ike ịlanarị ma nwee ọganihu dị ka ụdị.
Syria bu "ahia" nke ihe izizi mbu nke oru ugbo na akuko mmadu, ya mere obu ihe ngbu mgbu na o di ebe ahu, ebe ha gha agha nkpuru nye ulo ala ha.
Ọgwụgwụ nke World Vault agaghịzi adị mma
Ozi ikpeazụ nke enwetara site na Svalbard bụ Vault ahụhụ infiltration n'ihi na-ebili okpomọkụ, na-etinye akụ ya n'ihe ize ndụ n'etiti akpụrụ mmiri.
Svalbard Vault mechara merie nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe.
Mmụba nke okpomọkụ mere ka permafrost nkịtị gbazee, nke pụtara na ala gbara ụlọ ahụ gburugburu malitere ịgbaze, mmiri wee malite ịba n'ime oghere ụzọ.
RFI Hege Aschim, ọnụ na-ekwuchitere Statsbygg, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ na ọrụ aka na Svalbard na nkwupụta kwuru:
«Ọwara dị ogologo, gburugburu 100 mita. Na Ọktọba 2017, anyị nwere oke okpomọkụ na oke mmiri ozuzo na mpaghara Svalbard ma anyị nwere oke ide mmiri "
"Ọ bụ n'abalị Satọdee. Ọtụtụ mmiri batara site na oghere mbata, ihe ruru 15 ma ọ bụ 20 mita n'ime ime ebe ọ bụ na ọ dị oke oyi n'ime, mmiri ahụ na-ajụ. Aghaghị m ikwu na mkpụrụ na mkpụrụ vault n'onwe ya enweghị ihe ọ bụla. Ma anyị nwere akpụrụ mmiri n'ọnụ ụzọ n'ọnụ ụzọ, nke a doro anya na nke a ekwesịghị ime.
Ebe anyị enweghị ike iji igwe ebe ahụ banye, anyị na-ewepụ ha site n'enyemaka nke ndị ọrụ ọkụ na ndị ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ ihe dị egwu. "
Ndị na-ahụ maka Global Chamber of Seeds na-emesi obi ike na mkpụrụ ndị ahụ (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 900.000) emetụtaghị, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iji usoro iji dozie nsogbu ahụ.
Companylọ ọrụ Statsbygg wepụrụ akụrụngwa eletriki n'ọnụ ụzọ iji belata ebe ọkụ na-ekpo ọkụ wee wuo mgbidi na-enweghị mmiri n'ime ọwara na olulu mmiri na ugwu ndị gbara ya gburugburu.
Onye nkwuchite Statsbygg RFI Hege Aschim kọrọ:
“Anyị ga-agbanwe oghere oghere wee wuo akụkụ ọhụrụ kpọmkwem. Emere ya na ihe dara site na ọla, yabụ ọ ga-abụ ụlọ siri ike karị.
Anyị ga-enyekwa aka rụọ ọwara ahụ site n'ịgbanwegharị ala gbara ya gburugburu. Anyị ga-agbanwe ala dị ihe dị ka mita cubic 17.000 gburugburu ọrụ ahụ.
Anyị ga-enyere ala a aka imeju ekele maka ọkpọkọ ndị na-ajụ oyi. N’elu ọwara ahụ, anyị ga-etinye ụdị kapeeti na-ajụkwa oyi. Ihe a niile iji nyere permafrost aka ịkwado. "
Emebere ọrụ ndị a n’oge opupu ihe ubi nke afọ a, obere oge ka afọ iri gachara ka e kere World Bank Bank.
Agencieslọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọrụ, gụnyere Gọọmentị Norwegian, nwere olileanya na nchekwa Svalbard ga-adịru mgbe ebighi ebi na mpaghara a, Arctic, n'etiti ndị ọnọdụ okpomọkụ ụwa kacha emetụta.
A ikpeazụ echiche
Emeela Vault World World iji hụ na echekwara ndụ ndị mmadụ na mbara ala nke ha onwe ha na-ahụ maka ibibi n'ụzọ dị iche iche.
Ọ dị ka ihe na-emegiderịta onwe ya, mana ọ bụ eziokwu dị mwute na n'otu aka, anyị na-ebute mmetọ, anyị na-egbu onwe anyị, anyị na-ebibi gburugburu ebe obibi ma anyị na-eme ihe ndị ọzọ metụtara na omume anyị, na nke ọzọ, anyị na-ejide n'aka lanarị ọ bụrụ ọdachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Noticias » Ọgwụgwụ nke World Vault dị na Svalbard
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara biogas